Eritrea: "CIA waxay isku dayday iney afgambi igu sameyso" - BBC News Somali
Eritrea: "CIA waxay isku dayday iney afgambi igu sameyso"
2 Nofembar 2019
Lahaanshaha sawirka PETER BUSOMOKE
Dowladda Eritrea ayaa soo saartay warmurtiyeed aan horay looga baran iyada oo warmurtiyeedkeeda ku eedeysay iney laanta sirdoonka Mareykanka ee CIA ay Eritrea u maleegtay afgambi. Waxayna xukumadda Asmara warmurtiyeedkeeda carrabka ku dhufatay laanta sirdoonka Israa'iilna iney afgambigaasi la damacsanaa gacan ka geysatay.
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qoxootiga ee UNHCR waxay CIA ku amartay inuu gacan ka geysto sidi ay shacabka Eritrea uga qixi lahaayeen dalkooda waa sida warmurtiyeedka Xukumadda Asmara lagu sheegaye.
"Kooxaha afgambiga maleegayeyna" kooxda qaranka kubadda cagta Eritrea iney dalkooda ka baxsadaan oo ay waddamo kale magangalyo weydiistaan ayey ku dhiirragelinayeen ayaa lagu yiri warmurtiyeedka.
Laanta Sirdoonka Israa'iilna waxay ka shaqeyneysay ayey tiri warmurtiyeedka Asmara ka soo baxay iney diyaariso xoga been ah oo ku saabsan iney xukumadda Asmara ay xiriir la leedahay kooxaha argagixisada ee Bariga Dhexe ka dhaqdhaqaaqa.
"Dowladda Eritrea inuu si fudud isbeddel uga dhaco ma aha mid suuragalayo, sidaa darteed dowladda Eritrea si looga takhaluso, in la adeegsado xoogag dibadeed oo aqoon u leh ciidanka Eritrea iyo sida ay u shaqeeyaan ay lagama maarmaan tahay. Dowladda shuruudahaasi buuxin kartana ay tahay maamulki wayaanaha uu horkacayey ee Addis Ababa ka arriminayey" ayey tiri.
Dokumantiga sirta ee ay shaacisay xukumadda Asmara ee ay warmurtiyeedkeda ku sheegtay waxaa kale oo ka mid ahaa: "Dowladda Itoobiya awoodda ciidan uu dalka Eritrea leeyahay daraasadda ku saabsan ee loo soo gudbiyey inuu yahay mid dhab ah oo muddo gaaban suuragelin karo in xukumadda Asmara laga takhaluso, laakiin waxaa lagu wargeliyey 'iney degdegin'."
"Balse iyagu waxay damacsanayaayeen dagaalki dhacay 1998 kaddib iney rabeen markale iney dagaal soo qaadaan. Dowladda Eritrea si loo afgambiyana Qaramada midoobay iyo Hay'adaha bahwadaagta la ahna waxay Itoobiya xilligaasi ka heleysay taagero buuxda.
Iskudaygi loo sameeyey iney dowladaha Mareykanka iyo Israa'iil iney eedda loo soo jeediyey jawaab ka bixiyaanna ma noqon mid suuragasha.